Sun, Jul 5, 2020 at 4:16am
काठमाडौँ, ९ असोज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय चाबहिलका प्रधानाध्यापकसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार सहायक प्रधानाध्यापक घनश्यामराज काफ्ले, सहायक प्रधानाध्यापक भरतविक्रम बिसी, लेखापाल बद्रीप्रसाद पराजुलीललगायतले विद्यालयको क्यान्टिन निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् मूल्याङ्कन गरी रकम निकासा गर्ने प्रयोजनका क्रममा घुस मागेको आरोप लागेको छ । उनीहरुले सेवाग्राहीसँग रु एक लाख ५० हजार घुस लिँदै गरेको..
लमजुङ र गोरखाको सिमानामा भूकम्पको धक्का महसुस
लमजुङ, ९ असोज लमजुङ र गोरखाको सिमानामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । आज साँझ ६ बजेर ४९ मिनेट जाँदा लमजुङ र गोरखाको सिमाना खरिबोटबाट पाँच किलोमिटर उत्तरतर्फ केन्द्र विन्दु बनाएर ४ दशमलव ७ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार २०७२ सालमा गएको भूकम्पको पराकम्प मात्र हो । भूकम्पको धक्काबाट जिल्लामा कुनै अप्रिय घटना नघटेको प्रमुख..
लहान, ९ असोज आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरी फरार रहेका दुई जनासहित विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका पाँच जनालाई आज एकै दिन सिरहा प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार दुई र डाका मुद्दामा फरार तीन गरी पाँच जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो । आफ्नै श्रीमतीलाई कुटपिट गरी हत्या गरेर फरार रहेको आरोपमा प्रहरीले..
एकाएक अनुगमन टाेली दरबारमार्ग पुगेपछि व्यापारीहरूकाे भागाभाग
काठमाडौं, ९ असाेज । दरबार मार्गमा एकाएक सरकारी अनुगमन टोली पुगेपछि पसलेहरूकाे भागाभाग भएकाे छ । बिहीबार अनुगमन टोली पुग्दा दरबारमार्गस्थित शेर्पा मलका पसले तथा कर्मचारीहरू पसल बन्द गरेर भागेका हुन् । मलभित्रका ग्यारेज, सिल्हौटी, अटुम लगायतका अधिकांश पसलहरू बन्द गरेर पसलेहरू भागेका अनुगमन टोलीका संयोजक कपिल रेग्मीले जानकारी दिए । केही पसलेहरू भागे पनि आफ्नो अनुगमन नरोकिने संयोजक रेग्मीले बताए । यसअघि सो अनुगमन टोलीले दरबारमार्गस्थित सामसुङ..
कृषि विकास बैंककाे ह्याकिङ प्रकरण: स्याङ्जाबाट थप एकजना पक्राउ
काठमाडौं, ९ असाेज । कृषि विकास बैंककाे ह्याकिङ प्रकरणमा अर्का एकजना पक्राउ परेका छन् । यसमा संलग्न १२ जना पक्राउ परिसकेपछि स्याङ्जाबाट रामकृष्ण भुसाल पक्राउ परेका हुन् । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाका अनुसार पक्राउ पर्ने रामकृष्ण भुसाल स्याङ्जा वालिङका हुन् । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले उनलाई स्याङ्जाबाटै पक्राउ गरेको हो । एसएसपी थापाका अनुसार उनी प्रतीक्षा निर्माण..
सौतेनी बुबाको सम्पतीको लागी २ नागरिकता : बाबु र ठेगाना फरक–फरक
स्याङ्जा, ९ असोज । यहाँका एक महिलाले नेपाली नगरिकताको प्रमाणपत्र दुईवटा लिएको भेटिएको छ । हेमा राना नाम गरेकी महिलाले फरक–फरक समयमा र बाबुको नामसमेत छुट्टाछुट्टै भएको दुई वटा नागरिकता लिएको तथ्य खुलेको छ । ती महिलाले पहिलो नागरिकता साविकको कुवाकोट गाविस वडा नं ३ (हालको चापाकोट नगरपालिका १०) ठेगाना राखेर २०६० मङ्सिर ८ गते १३४९९ नम्बरको नागरिकता प्रमाणपत्र लिएकी छिन् ।..
भालुको बिगबिगी बढ्यो, त्रासैत्रासमा बित्छ दिन, रातभरि जाग्रम बस्नुपर्ने बाध्यता
सोलुखुम्बु, ९ असोज जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा भालुको बिगबिगी बढेको छ । भालुको बिगबिगी बढेसँगै मानिसलाई आक्रमण गर्ने क्रमसमेत बढेको छ । बुधबार मात्रै सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–१ मा भालुको आक्रमणबाट एक वृद्ध सख्त घाइते भएका छन् । टाक्सिन्दुको हेवा जङ्गलमा बिहीबार दिउँसो गाई चराउँदै गरेका पासाङ शेर्पालाई भालुले आक्रमण गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार ७६ वर्षीय शेर्पा गाई चराउँदै सितिलिङ भन्ने स्थानमा..
बसपार्कमा खटिए सादा पाेशाकवाला प्रहरी, भाडा बढी लिए तत्काल खबर गर्नुस्
काठमाडाैं, ९ असाेज । प्रहरीले लामो दूरीका सवारीसाधनमा बढी भाडा असुल्ने सवारीसाधनलाई तत्काल कारवाही गर्ने भएकाे छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चाडबाडको समयमा लामो दूरीका सवारीसाधनमा बढी भाडा असुल्ने सवारीसाधनलाई तत्काल पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्ने भएको हाे। हरेक वर्ष दसैं र तिहारमा काठमाडौं बाहिर जाने सवारीसाधनले बढी भाडा लिने गरेको व्यापक गुनासो आउन थालेपछि यो वर्षदेखि कडाइ गर्न थालेको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा..
काठमाडौँको एक सार्वजनिक वनको जग्गा व्यक्तिका नाममा !
काठमाडौँ, ८ असोज काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ मा रहेको सार्वजनिक वनको जग्गा कीर्ते गरी हाउजिङ र व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । कानून व्यवसायी र मालपोत कार्यालयका अधिकृतकै मिलेमतोमा जग्गा कीर्ते गरेको पाइएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले जनाएको छ । यहाँको ९२ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते सम्बन्धमा सिआइबीले गरेको अनुसन्धानमा सो रहस्य खुलेको हो । सिआइबीले उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन आज..
दुर्लभ वन्यजन्तु बाघको छालासहित तीन जना पक्राउ
चितवन, ८ असोज दुर्लभ वन्यजन्तु बाघको छालासहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा वुटवल उपमहानगरपालिका–७ ईट्टाभट्टी घर भएका ४३ वर्षीय दिपक भनिने चिरञ्जिवी सेन ठकुरी, पाल्पाको निस्डी गाउँपालिका–२ सहलकोट निवासी ३३ वर्षीय चुमबहादुर राना र वाग्लुङ जिल्ला ढोरपाटन नगरपालिका–९ निवासी २६ वर्षीय हिम साङ्वो गौचन रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक एकनारायण कोइरालाका अनुसार..
कृषि विकास बैंक हृयाकिङका योजनाकार काले, भारतमा बसेर नेपालीलाई परिचालन !
काठमाडौँ, ८ असोज महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखामा टेकुमा पत्रकार सम्मेलन गरी कृषि विकास बैंकबाट झण्डै ५ करोड रुपैयाँ चोरीमा संलग्न १२ जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ११ नेपाली र १ भारतीय नागरिक छन् । घटनाका मुख्य अभियुक्त 'मास्टर माइण्ड' भने पक्राउ परेका छैनन् । ती व्यक्ति विदेशी रहेको जानकारी दिएपनि प्रहरीले पहिचान खुलाएको छैन । 'पक्राउ परेकाहरूले विदेशी..
पोखरा, ७ असोज पोखराबाट आफु अपहरणमा परेको भनेर नाटक गर्ने एक जनालाई प्रहरीले आज पक्राउ गरी आवश्यक कारवाही शुरु गरेको छ । पोखरा–११ को फुलबारी बस्ने ४२ वर्षीय नारायणप्रसाद पौडेललाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार केसीले जानकारी गराउनु भएको छ । लेनदेनको विषयमा विपक्षीलाई फसाउने उद्देश्यले पौडेलले अपहरणको नाटक गरेको रहस्य खुलेपछि पक्राउ गरिएको बताइएको छ । आफु अपहरण परेको भनेर..
कार र ट्रक ठोक्किँदा चालकसहित ५ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ, ७ असोज । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपुरको कावासोती नगरपालिका ८ मा ट्रक र कार ठोक्किँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । लु १ ख ८५३२ नम्बरको ट्रक र बा २१ च ६४०९ नम्बरको कार खरकट्टा जंगल क्षेत्रमा गएराति पौने ११ बजेतिर ठोक्किँदा कारमा रहेकाहरु मृत्यु भएको हो । मृतक सबै पुरुष भएको र उनीहरुको सनाखत नभएको नवलपुर प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।..
काठमाडौँ, ६ असोज नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा फरार व्यक्तिलाई जेल चलान गरिएको छ । ब्यूरोबाट खटिएको टोलीले वैदेशिक रोजगार मुद्दामा ठगी गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका–१० बस्ने ४६ वर्षीय विमला थापालाई आइतबार वानेश्वरबाट पक्राउ गरी आज जेल चलान गरेको हो । ब्यूरोका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले वैदेशिक न्यायाधीकरणको २०७४ असार २६ को फैसलाअनुसार रु एक लाख ५० हजार..
‘४ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका हिंसाको सिकार’
काठमाडौँ, ६ असोज । मुलुकमा चारदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका बढी हिंसाको सिकार भएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आज ‘जबर्जस्ती करणीमा परेका महिलाको मानवअधिकार एवं न्याय पहुँचमा नेपाल प्रहरीको जवाफदेहिता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम’ मा नेपालमा उक्त उमेर समूहका बालिका हिंसाको सिकार भोग्न बाध्य भएको बताइएको हो । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मुलुकमा रहेका दलित, जनजाति, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका..
‘घरमा ताल्चा लगाएर दसैं मनाउन जाँदै हुनुहुन्छ ? प्रहरीलाई जानकारी गराउनुहोस् ’
काठमाडाैं, ६ असोज महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले आउँदै गरेका दसैं, तिहार तथा छठलगायत पर्वलाई लक्षित गरेर चाडपर्वको समयमा हुनसक्ने सम्भावित घटना र अपराध न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन, सुरक्षित र भयरहित वातावरण तथा सम्भाव्य अपराधको न्यूनीकरणमा नेपाल प्रहरी सधैं सक्रिय रहेको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले बताए । त्यसमा पनि चाडपर्वको समयमा आपराधिक क्रियाकलाप बढी हुनसक्ने..
कर नतिर्नेलाई कडा कारवाही गरिने
हेटौँडा, ५ असोज आन्तरिक राजश्व कार्यालय हेटौँडाद्वारा मकवानपुरको बेग्लाबेग्लै दुई स्थानमा व्यवसायी र उद्योगीहरुसँग करदाता शिक्षा सम्बन्धमा दुईदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रम मकवानपुरको वाग्मती गाउँपालिकाको राईगाउँ र फापरबारीमा सम्पन्न भएको हो । सो अवसरमा उद्योगी व्यवसायीहरुले कर तिर्ने सम्बन्धमा विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए । उक्त अवसरमा करदातासम्बन्धी प्रशिक्षण दिँदै आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख..
बाढीले बगाउँदा २ बालिका बेपत्ता
बेनी, ५ असोज । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटस्थित कोटखोलामा गए राति बाढीले बगाउँदा दुई बालिका बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा बेनी–९ की १० वर्षीया प्रविना परियार र बेनी–५ की छ वर्षीया अनुश्का परियार छन् । बाढी बस्तीमा पस्दा बगरफाँटका दीपक जुग्जाली, पार्वती परियार र राममाया परियारको घरमा क्षति पुगेको छ । सो स्थानमा रहेको बुद्ध एकेडेमीको भवन र खेलमैदानमा समेत क्षति..
निस्क्रिय पारियो पशुपतिमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु
काठमाडौँ, ३ असोज पशुपतिनाथ मन्दिरको पश्चिम गेटबाहिर फेला परेको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाले निस्किृय पारेको छ। सो वस्तु सकेट बम भएको आशंका गरिएको छ। यसबारे सेनाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। शंकास्पद वस्तु निस्कृय पार्ने क्रममा कुनै पनि क्षति नभएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहले जानकारी दिए।..
पशुपतिनाथको मूल ढोका अगाडि बम भेटियो
काठमाडौँ, ३ असोज शुक्रबार पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल ढोका अगाडि बम भेटिएको छ । मन्दिरको मूल ढोका अगाडि बम भेटिएको विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष सागर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले त्यहाँ बम डिस्पोज गर्नको लागि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको डिस्पोजल टोली खटिईरहेको छ । थप बिवरण आउन बाकी नै छ । ..
रामजानकी मन्दिरमा बम राखिएकाे चर्चा, मन्दिर खाली गराउँदै सुरक्षामा कडाइ
जनकपुर, ३ भदाै । जनकपुरका प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामजानकी मन्दिरमा बम राखिएकाे चर्चा चलेकाे छ । बम राखिएकाे हल्ला चलेसँगै मन्दिर खाली गराइएको छ । मन्दिर प्रागंणमा कसैले वम राखिदिएको सूचना प्रहरीलाई आएपछि मन्दिरमा पूजा गर्नेहरुलाई बाहिर निकालिएको छ । शुक्रबार मध्याह्न १२ बजेदेखि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेकाे छ । मन्दिर प्रागंणमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । सुरक्षाकर्मीलाई मन्दिरको चारैतिर खोजी शुरु गरेको छ..
विप्लवद्वारा नगरपालिका कार्यालयमा बम विस्फोट
अछाम, ३ असाेज । सरकारद्वारा प्रतिवन्धित पार्टी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले गए राति अछामकाे कमलबजार नगरपालिकामा बम विस्फोट गराएको छ । राति पौने १ बजे नगरपालिका कार्यालयमा सो समूहले प्रेसरकुकुर बम विस्फोट गराएको प्रहरी नायब उपरीक्षक जनकबहादुर शाहीले जानकारी दिए। विस्फोटबाट ठूलो क्षति नभएको शाहीले बताए । तार जोडेर करीब १०० मिटर टाढाबाट बम विस्फोट गराइएको पाइएको छ । प्रहरीले विस्फोट गराउने समूहको खोजी गरिरहेको छ..
लागुऔषध कारोबारमा भारतीय गिरोह सक्रिय, ४३ सय २६ एम्पुलसहित ७ जना पक्राउ
काठमाडौं, २ असाेज । ठूलो परिणामको लागुऔषधसहित काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट ७ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले ४३ सय २६ एम्पुलसहित ३ चारतिय र ४ नेपाली गरी ७ जनालाई पक्राउ गरेको हाे। नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले विभिन्न मिति र स्थानबाट लागुऔषध ४ हजार ३ सय २६ एम्पुलसहित ७ जनालाई पक्राउ गरी बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो। बुधबार ब्युरोको टोलीले काठमाडौँको शान्तिनगरबाट भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा..
काठमाडौँ, २ असोज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरिय प्रहरी प्रभाग थलीमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक विपिनचन्द्र पन्तलाई घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ । सवारी दुर्घटनाको सहमति बमोजिम मिलापत्र गरिएकामा सो कार्य गरिदिएबापत पन्तले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोगबाट खटिइएको टोलीले उहाँलाई बुधबार नियन्त्रणमा लिएको हो । उहाँलाई घुसबापतको रु पाँच हजारसहित कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका–५ स्थित एक खाजा घरबाट नियन्त्रणमा लिएको..
खोटाङ, २ असोज । लगातारको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण खोटाङमा सञ्चालित सबै यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ । राजधानी काठमाडौँ तथा तराईका जिल्ला जोड्ने सडकको विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी र पहिरोका कारण मङ्गलबार रातिदेखि यातायात सेवा अवरुद्ध भएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्गको अर्खौले–हलेसी, हलेसी–जयराम, घुर्मी–खुर्कोट तथा सगरमाथा राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा पहिरो झरेका कारण सडक अवरुद्ध भएको खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव..
काठमाडौँ, १ असोज । घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले प्रहरी नायब निरीक्षकलाई कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेको छ । आज अख्तियारको टोलीले महानगरीय प्रहरी वृत बौद्ध मातहत रहेको प्रहरी कार्यालय थलीका प्रमुख बिपिनचन्द्र पन्तलाई सेवाग्राहीबाट पाँच हजार घुस रकम लिँदै गर्दा अख्तियारको टोलीले रङ्गेहात पक्राउ गरको हो । थलीका स्थानीय व्यवसायीलाई बिना कारण पटक–पटक दुःख दिने गरेको र रकम माग गर्ने..
काठमाडौँ, १ असोज । संखुवावासभाको खाँदबारीबाट दुई जना बिरामी लिएर गएको बोलेरो गाडी अक्करको भीरबाट अरुण नदीमा खस्दा ६ जना बेपत्ता भएका छन्। धर्मदेवी नगरपालिकाको अक्करको भीरमा मंगलबार राति १०: ५ बजे को १ ज ३७४९ नम्बरको बोलेरो गाडी दुर्घटना भएको घटनास्थल पुगेका अर्का गाडी चालक प्रेम तामाङले जानकारी दिए। तामाङका अनुसार गाडी चालक सन्तोष विक चालक सहित ६ जना बेपत्ता भएका..
काठमाडौँ, ३१ भदौ थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको हाताभित्र रहेको अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट भएको छ । उक्त विस्फोटनमा परी दुई प्राविधिक घाइते भएका छन् । प्लान्ट मर्मत गरिरहेको अवस्थामा विस्फोटन भएको अस्पतालका निर्देशक प्रा डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो । घाइतेको नाम अस्पतालले सार्वजनिक गरेको छैन । हाल दुवै जनाको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । “प्लान्ट सफा गर्ने क्रममा एक्कासि..
डोटीमा मदिरा ओसारपसारमा बालबालिकाको खुलेआम प्रयोग !
डोटी, ३१ भदौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला डोटीका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा पछिल्लो समय मदिरा ओसारपसार कार्यमा सा–साना बालबालिकाको खुलेआम प्रयोग भइरहेको पाइएकोे छ । गाउँमा दशैँको चहलपहल शुरु भएसँगै मदिराजन्य पदार्थको माग बढ्न थालेपछि मदिरा ओसारपसारमा बालबालिका प्रयोग भइरहेको पाइएको केआईसिंह गाउँपालिका वासुदेवीका स्थानीय शेरबहादुर ऐरले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मदिरा ओसारपसारमा बालबालिका तथा स्कुले केटाकेटीको प्रयोग भइरहेको छ, जो आफैँमा गैरकानुनी हो..
नर्सिङ पढ्दै गरेकी छात्रा होस्टलमै झुण्डिएकाे अवस्थामा भटिइन्
धरान, ३१ भदाै । धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत एक छात्रा होस्टलमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी छन् । बिएससी नर्सिङ पहिलो वर्षमा अध्ययनरत १९ वर्षीय अञ्जना देव मंगलबार आफू बस्ने होस्टलको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी हुन् । हत्या हो या आत्महत्या त्यस बिषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीका अनुसार मृतक अञ्जनाको रुम पार्टनरको मंगलबार बिहान डिउटी..
Results 1946: You are at page 15 of 65